मेकअप नगरेको भन्दै मिस नपालका प्रतियोगिलाई गाली गर्ने जजलाई सामाजिक सञ्जालमा गालीको बर्षा – Rastriyapatrika
मेकअप नगरेको भन्दै मिस नपालका प्रतियोगिलाई गाली गर्ने जजलाई सामाजिक सञ्जालमा गालीको बर्षा
rastriyapema | April 5, 2019 | Comments
काठमाडाैं – मिस नेपाल अडिसन–२०१९ को एउटा भिडियो यतिवेला भाइरल बनेको छ । भिडियोमाथि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेको छ। मानिसहरु फरक–फरक धुर्वमा बाँडिएका छन्।
भिडियो क्लिपमा प्रतियोगी ललितपुरकी अस्मिता महर्जनमाथि निर्णायक मण्डलकी सदस्य रचना गुरुङले ‘दुव्र्यवहार’ गरेको देखिन्छ । कोरियोग्राफर तथा मिस नेपाल प्रशिक्षक गुरुङले प्रतियोगीमाथि मेकअप नगरेको र तयारी नगरी आएको आरोप लगाउँदै कटाक्ष गरेकी छन्।
अडिसनमा गुरुङले प्रतिस्पर्धी भएर आउँदा किन मेकअप नगरेको भन्दै भद्दा प्रस्न तेस्र्याएकी छन्। जवाफमा प्रतियोगीले भनेकी छन्। ‘कसरी मेकअप गर्ने ? थाहै भएन।’
यो मेकअप नगरेको बिषयमा प्रतियोगीलाई गाली गर्ने, सम्मान नगरी बोल्ने जजले दर्शकले भिडियो हेरेपछि गाली नै गाली गरेका छन! जजको गर्ने पनि शिमा हुन्छ, हरेक प्रतियोगीलाई सम्मान गरेर बोल्नु पर्छ भन्ने कुरा मिस नेपालका जजले भुलेपछि यो विवादले मिस नेपालको इज्ज़त तल झारेको दर्शकको भनाई छ।
पूर्वमिसनेपाल सदीक्षा श्रेष्ठले भनिन्, ‘तपाईं इन्टरभ्यु दिन जाँदा सफा सुग्घर र नयाँ कपडा लगाएर जानुपर्छ। मिस नेपाल पनि त्यस्तै हो,’ उनले भनिन्।
आफ्नो व्यवहारमाथि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुन थालेपछि गुरुङले भनेकी छन्– सामाजिक सञ्जालले मेरो भनाइ तोडमोड गर्याे।
पूजा गुरुङ थप्छिन्– ‘तपाईंले राम्रोसँग तयार भएर आउनुपर्छ। यो ‘ब्युटी पेजेन्ट’को अडिसन हो जहाँ तपाईं पोटेन्सियल हुनुपर्छ। यहाँ तपाईंको व्यक्तित्व झल्किनुपर्छ। तपाईं आत्मविश्वासी र बौद्धिक देखिनुपर्छ। मेकअप नगरी आउनुहुन्छ भने त्यो त अनादर गरेजस्तो भयो।’
प्रतियोगीलाई होच्यानु गलत भएको पुजाको बुझाइ छ। भन्छिन् ‘प्रतियोगीलाई गाली गर्नुभन्दा पनि अनुभुवी भएको नाताले सम्झाउनुपथ्र्याे ।’
यो भिडियो समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि मिस नेपाल २०१८ शृङ्खला खतिवडाले ट्वीटरमा आफ्नो बिना मेकअपको फोटो पोष्ट गरेकी छन् । उनको यो पोष्टले सुन्दर हुनलाई मेकअप गर्नै पर्छ भन्ने गुरुङको तर्कलाई बलियो जवाफ दिएको छ । शृङ्खलाले आफ्नो फोटोसँगै लेखेकी छन्, ‘नो मेक अप एण्ड स्टिल व्युटीफूल’ अर्थात् ‘मेकअप नगरे पनि सुन्दर’ ।